Ravo Nambinina Notorian’ny zandary ihany koa
Nohadihadian’ny zandary noho ny ampamoaka nataony mikasika kolikoly avo lenta tao anatin’ny Minisiteran’ny fahasalamana I Ravo Nambinina
Ramasomanana. Afaka nody tany amin’ny fianankaviany tsy nisy arakaraka izy taorian’ny fanadihadiana naharitra ora dimy azy, teny amin’ny Sampana misahana ny heloka an’habaka etsy amin’ny Toby Ratsimandrava. Hiroso amin’ny fitondrana miandalana hiatrika ny fanadihadiana any amin’ny zandarimariam-pirenena izy ireo, raha ny nambaran’ny mpisolovava Maître Eric Rafidison. “Efa tamin’ny septambra 2020 no nanantona ny Transparency International, navoaka ihany. Tao anatin’izay rehetra izay no notsoahina ny dosie maha mpiasa. Niresaka tamin’ny mpiasa, niresaka tany amin’ny Minisiteran’ny vola sy ny tetibola, saingy tsy misy manana fahefana hamoaka an’io ve?”, hoy kosa i Ravo Nambinina.
Tetsy ankilany, natao fanadihadiana hafa momba ny fitoriana nataon’ny zandary ihany koa izy. “Raha ny nambara taminay, rehefa nivoaka tamin’ny tambajotran-tserasera ny fitoriana azy, dia nisy nanao teny mahery niantefa tamin’ny zandarimariam-pirenena, hoy ny mpisolovava. Vesatra nitorian’ny DLC (Direction de la Législation et du Contentieux) eo anivon’ny Primatiora ho nanaparitaka lainga mety hiteraka fanakorontanana moa no hanenjehana an’i Ravo Nambinina, saingy manamafy izy fa manana porofo. Niampy ny fitorian’ny zandary indray izany ny raharaha momba azy.
Fifofoana ny ain’ny Filoha Misy idirana resa-bola tamin’ny fifidianana ?
Tsy arakaraka ilay fanamelohana sasany, izay toa maneho sy manondro ireo tsy mitovy hevitra ara-politika amin’ny mpitondra aloha ny ahiahy amin’ny mety ho ao ambadiky ny famonoana ny Filoha,
Zaranaina Christian “Azo sakanana ny fiovaovan’ny valanaretina”
Tsy mitsahatra miteny aho, hoy ny mpikaroka momba ny fitsaboana, Zaranaina Christian, fa efa mipetraka hatrany ny vahaolana mikasika ny valanaretina rehetra eto ambonin’ny tany na ho an’ny “hépatite virale”
Mpisehatra momba ny sakafo Malagasy Mafimafy ny niainana ny hamehana
Nisokatra omaly ary hifarana ny sabotsy 31 jolay izao etsy amin’ny zaridainan’Antaninarenina, ny hetsika varotra fampiratiana ahitana ireo vokatra Malagasy miompana amin’ny resaka sakafo na ilay hoe